Faucet fandroana mainty miaraka amina Spout Swivel misaraka
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / WOWOW Faucet amin'ny fandroana mainty miaraka amina spout Swivel
Fandroana fandroana mainty WOWOW amin'ny fandroana fanatanjahan-tena mitontona
naoty 4.91 avy tany 5 mifototra amin'ny 23 mpanjifa naoty
(23 mpanjifa famerenana)
Ny fitaovana varahina matevina tsara kokoa raha oharina amin'ny metaly hafa
Tsy mila miahiahy momba ny olan'ny harafesina, korosi.
Ny fitaovana avo lenta, ny fikojakojana ny fikojakojana, ny fahamarinan-toerana ambony, ny lava amin'ny fiainana.
2320300B torolàlana fametrahana
Misafidy ny lavarangana fandroana 2320300B
Rehefa mamolavola na mamerina mandrafitra ny efitra fandroana ianao, dia tsy azonao atao ny manamaivana ny fiantraikan'ny faucets ao amin'ny efitrano fandroana. Ireo tena ireo angamba no singa kely indrindra ao amin'ny efitranonao, nefa na izany aza dia ireo toerana ifantohana ao amin'ny efitranonao. Izay rehetra miditra ao amin'ny efitrano fandroana, dia mijery mivantana ny faucets fandroana voalohany. Noho izany dia misy ny maha-zava-dehibe indrindra ny fisafidianana tsara ny faucets moinsinao. Ny poketra fandroana ho an'ny efitra fandroana dia tonga amin'ny endriny maro, endriny sy volavola. Mety ho sarotra amin'ny sasany ny fisafidianana gripo fandroana mety. Ny bizina fandroana mety dia mety hanome ny efitrano fandroana azy manokana raha ny tena ilainy. Izy io dia afaka manamboatra sedra iray manontolo amin'ny fisehoan'ny efitra fandroana. Fa ny tena lehibe, ny faucets an'ny fandroana dia tsy maintsy mifanandrify amin'ny fomba fandroana ankapobeny. Noho izany dia azonao atao ny mandinika ny lafiny rehetra ao amin'ny efitra fandroana izay eritreretinao hatao. Na izany aza, aza hadino fa ny famolavolana na ny famolavolana indray ny efitrano fandroana dia tena mahaliana indrindra. Azonao atao ny mamolavola ny efitra fandroana vaovao ho anao manokana. Avelao izahay hanampy anao amin'ny kiraro fandroana mainty be dia be.
Maloto feno fandroana miparitaka be
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny poketra fandroana miparitaka sy ny fampitaovana fiasana hafa, dia ny toeran'ireo tànana, na mafana ary mangatsiaka. Eo amin'ny sisin'ny efitra fandroana miely be dia be ny toerana misy azy isaky ny sisin'ny faucet. Eo afovoany mametraka faucets ohatra, dia mampiasa lavaka tokana nidina an-drano ianao. Etsy an-daniny, miaraka amina boaty tokana ohatra, dia azonao atao ny mifehy ny rano mafana sy mangatsiaka amina tànana tokana. Amin'ny fomba fandroana miparitaka dia mila manondraka lavaka telo ao anaty rano mandro ianao ary mifehy ny rano amin'ny tanana roa sy mangatsiaka. Izany dia manamora kokoa ny fifehezana tsara ny mari-pana ny rano. Misafidiana gripo fandroana be dia be, ianao dia manolotra safidy sy vita isan-karazany. Afaka mampisy fiantraikany goavana amin'ny décor anao amin'ny loko mainty ianao. Azo antoka fa hahatonga ny kitapo fandroana be miparitaka ao anaty efitrano fandroanao. Ankoatra ny sitraponao dia mila misafidy lahasa. Inona no tianao hataonao amin'ny fandroana mainty be dia be? Rehefa misafidy ianao, dia safidiho ny poketra mainty miparitaka be ho toy ny teboka fanokafana vaovao amin'ny volon'ny trano fandroana vaovao.
Krisitera mainty be miparitaka be
Ny mainty dia mety ho safidy mahavariana amin'ny haingon-trano ao amin'ny efitrano fandroana. Indrindra rehefa misy singa mainty hafa ao amin'ny efitranonao. Ny mofomamy fandroana mainty be dia be dia hifangaro amin'ny seho tsara amin'ny famoahana mandro. Mazava ho azy fa afaka manisy fiovana miaraka amin'ny poketra mainty miparitaka be ao amin'ny efitrano fandroana anao ianao. Voalohany indrindra satria ny gazoala fandroana mainty be dia be dia be. Koa satria tsy betsaka ny olona tsy sahy mampiasa an'io famolavolana feno herim-batana io ao amin'ny efitrano fandroany, azonao atao ny mampiavaka ny efitrano fandroanao miaraka amin'ity taovolon'ny efitra fandroana mainty WOWOW ity. Tsy any amin'ny toerana farany satria manome ity toerana ifantohana ity ao amin'ny efitrano fandroana, mba hampiakarana azy rehetra mba tsy hanamaivan-tena. Azo antoka fa tsy lavitra ny fenitra amin'ny efitra fandroana mainty miakatra WOWOW ny efitra fandroana misy anao. Tsy misy isalasalana fa misy olona mahita ny zavaboary manokana fandroana manokana anao, ho gaga miaraka aminy. Ary tsy teo amin'ny toerana farany noho ny fofona fandroana mainty miparitaka be izay nofidinao.
Alohan'ny fomba fanamboarana dia mila mandinika fangatahana fampiharana ianao. Inona ny tanjon'ny efitrano fandroana tsara tarehy izay tsy mahafeno ny filanao? Mazava fa ianao dia manapa-kevitra hoe ahoana no tadiavinao ny fampitaovana ny efitrano fandroana? Mitovitovy amin'ny ampahany amin'ny famolavolana, kely ny faucets ny fandroana miaraka amin'ny fiantraikany lehibe. Izay miharihary fa mihatra amin'ny fiasa koa.
Fangaro tsara ao anaty rano fandroana miparitaka be
Ny boaty fandroana mainty an'i WOWOW dia mety amin'ny ankamaroan'ny efitra fandroana. Saingy mazava ho azy fa tokony ho ampahany iraisan'ny sisa amin'ny famoahana mandro. Ny WOWOW koa dia mifanentana amin'ny boaty fandroana mainty, toy ny faucets mandro, mainty maloto ary fandroana mainty. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mamolavola ny efitra fandroana amin'ny firindrana miaraka amin'ny faucets fandroana mainty hafa. Hahatonga saina haingana ianao miaraka amin'izany! Ary ankoatr'izay, ny boaty fandroana mainty be dia be amin'ny WOWOW dia hanome anao ny asa tianao. Ity kora fandroana mainty miely be ity dia natao hanamboarana tsipika fandroana maoderina, minimalist nefa mbola ankehitriny. Na izany na tsy izany dia ny globo fandroana mainty be dia be an'ny WOWOW dia sady marevaka sy mahaliana ihany koa. Ny fampidirana pop-up integrated dia novolavolaina feno, ary mbola manome anao fanaraha-maso malefaka. Izay rehetra mahita ity lavo fandroana mainty be dia be dia ho talanjona amin'ny famolavolana sy ny asany. Tena natao ilay fahitana mazava sy miavaka. Afaitra fandroana miendrika be dia be ho an'ny fandroanao, toa ny vokatra rehetra ao aminy, WOWOW dia mampiasa fitaovana tsara indrindra ho an'ity potipotaly fandroana be ity. Hitanao izany ohatra rehefa mampiasa ny tànana amin'ity tafiotaly miparitaka be ity ianao. Ilay kalitao dia manome antoka ny fitoniana tsara kokoa ary ny fampiasana maharitra. Ny spout metatra avo manokana dia natao tamin'ny fomba ohatra fa ny lavaka dia tsy voafehy noho ny halavany. Mainty ny velaran'ity lavarangana fandroana miparitaka ity fa ny mpamatsy dia vita varahina. Ny fitaovana varahina miorim-bolo dia tena safidy tsara kokoa raha oharina amin'ny fitaovana metaly hafa. Tsy mila miahiahy ianao, toy ny vatohara. Azo antoka ny fahatokiana an'io vazy fandroana mainty be dia be io. Ankoatra izay, ny gorodona dia anti-scratch koa, noho izany dia hiantoka anao amin'ny fijery vaovao mandritra ny fotoana maharitra ianao. Ity jiro fandroana miendrika mainty miakatra avo lenta ity ho an'ny fandroanao no ho famaranana vita amin'ny famolavolana ny trano fandroana.
Kitapo fandroana mainty be dia be nametraka tsotra
Ny boaty fandroana mainty an'i WOWOW dia mora apetraka miaraka amin'ny torolàlana fametahana haingana. Ny rano mangatsiaka sy mafana dia mora atambatra miaraka amin'ny mpampifandray haingana haingana. Ho an'ny fandroana sy efitra fandroana dia mila lavaka telo 1 "-1.5" ary ny riandrano misy rano mety ho 0.2 "-1.2" matevina. Ny boaty fandroana mainty WOWOW miparitaka be dia mety ho fanamboarana 4 ka hatramin'ny 16 santimetatra avy, mifanaraka amin'ny fombanao manokana. Satria ny kilaon'ny efitra fandroana mainty miely be dia be azo itehirizana, WOWOW dia tsy matahotra ny hanome valiny 5 taona amin'ny vokatra. Ilay entana dia rakotry ny politikany miverina afaka 90 andro. WOWOW matoky ny kiraro fandroana mainty be dia be ary afaka afa-po amin'ny fahafaham-poan'ny mpanjifa 100% ihany ianao! Ny tombony amin'ny fantsom-pisakafoanana fandroana mainty be dia be amin'ny WOWOW:
 Manome wow-point amin'ny efitra fandroana fandroana
 Ny fitambaran-tsarimihetsika tokana sy moderina maoderina
 Manjary mitambatra miaraka amin'ny faucour hafa fandroana kely
 Manolotra fampiasa tsara indrindra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao
 Manambatra ny esthetics amin'ny fahaiza-manao avo
 vita amin'ny fitaovana varahina avo lenta
 Mora manadio sy mora ampiasaina
 Fanaterana 5 taona
faucet an-dakozia miaraka amina sprayer
lohan-tsifotra faucet ao an-dakozia
faucet an-dakozia hisintona
SKU: 2320300B Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa Tags: Black, Fehilasy mitokana, Fandraisana roa
Miteny ho azy ny vokatra. Ny fametrahana dia somary mafy noho ny mahazatra noho ny tatatra taloha. Ela ny ela vao namoaka azy io fa taorian'izay dia nandeha araka ny kasaina ny zava-drehetra. Zahao ireo sary, toa ny nolazaiko, fa miteny ho azy ity vokatra ity
S V ***2020-06-24
Tsy mety diso ianao amin'ity seta ity! Izy ireo dia tena vita tsara sy adidy mavesatra izay noho ny vidiny tsy nampoiziko. Nijery Home Depot sy Lowes izahay ho an'ny fantson-drano mainty voalohany. Tsy nisy na dia iray aza tsara tarehy tahaka izany ary indroa na avo telo heny ny vidiny. Afa-po tanteraka tamin'ity sety ity izahay!
J *** f2020-06-25
Vokatra tsara ho an'ny sandany, tsy ho fantatrao fa ambany 100 $ io. Toa tsara sy malama ary tiako ny farany matte. Mifanentana tsara ao an-trano fidiako ary miasa tsara.
Tiavo tanteraka ity faucet ity! Tsara sy mavesatra amin'ny vidiny mirary! Napetraka 4 volana lasa izay & tsy misy olana. Ny mainty matte tsara dia mifanentana tanteraka amin'ny kojakoja fidiovana hafa.
*** O L2020-06-28
Tena tiana ny fijery sy ny faucet ary ny knobs fa ny tampon-tampon-drano kosa miova loko hatrany. Naveriko ny seta voalohany novidiko satria nivadika loko fotsy izy io taorian'ny nampiasanay azy voalohany. Nahazo ny solony izahay ary ilay faharoa koa nanao izany. Tena manjavozavo aho. Tiako ny fijerin'ny fitaovana ao amin'ny trano fidiovanay vaovao, saingy tsy hitako izay mitranga amin'ilay fijanonana. Nandramana nify sy savony hafa izahay mba hahitana raha nisy fiovana na tsia. Nanandrana vahaolana fanadiovana samihafa izahay ary koa Magic Eraser hiezaka hanadio azy ireo fa tsy misy manampy amin'ny fiovan'ny volony. Tena nomeko an'ity kintana 5 ity raha tsy teo amin'ny fonony fihenan'ny tatatra!
Mahatalanjona fotsiny ny kalitaon'ity faucet fandroana ity. Azoko lazaina sahady fa vita tsara sy adidy mavesatra izany. Nijery hatraiza hatraiza ity karazana faucet ao amin'ny fandroana ity aho, saingy tsy nisy tamin'izy ireo toy ny mety amin'ny iray ao anaty fantsonako. Ny vidin'ireo magazay hafa dia lafo kokoa noho ity iray ity. Mazava tsara ny fizotry ny fametrahana ary mandeha araka ny eritreritr'izy ireo ny zava-drehetra. Tena mahomby sy mora ihany koa ny fizotrany. Ny fitoeran-drano koa dia zavatra tsara ampidirina ao anaty set. Ny loko dia ilay loko notadiaviko. Ny faucet fandroana dia misongadina be ao an-trano fandroana. Manoro hevitra an'iza an'ity vokatra ity aho ary ho tsapanao fa sarobidy isaky ny cent nividiananao azy io.
L f ***2020-07-02
Hatreto, tena tsara! Naharitra adiny roa ny vadiko vao nametraka roa tamin'ireto fa satria sarotra ny nesorina ireo fitaovana efa misy. Tiako ny tatatra fanosehana… mora kokoa amin'ny ankizy ny mampiasa azy. Ny fitaovana dia mainty fisaka araka ny voalaza ary inona ny lanjan'izay azonao. Raha misy zavatra miova dia havaoziko tokoa ity famerenana ity.
Faly be aho amin'ny bika aman'endriny, ny fahaiza-miasa ary ny kalitaon'ny setran'ny faucet ity. Tsara ny famaranana. Ny zava-drehetra momba ity seta ao anatin'izany ny fonosana ity dia tsara kokoa noho ny kalitaon'ny 'mpanorina' mitovy amidy any Lowe's sy Home Depot.
Tena mahasalama ny zava-poana ataontsika izay novidintsika, izay nisy loaka telo nendahina teo amin'ny latabatra marbra. Ny vadiko dia nokasihin'ny fahafatesany momba ny fomba mora nametrahana azy, mora lavitra noho ny ankamaroany. Mora tokoa ka nangataka ahy izy hividy faharoa ho an'ny trano fidiovanay hafa izay amboarinay ankehitriny. Ka nanao aho! Tena tsara tarehy izy io ary misy lanja kely amin'izany, tsy dia miloko chintzy mihintsy.
Nohavaozina ny trano fandroana ary tao anatin'ny fizotrany dia tsapanay fa harafesina ny faucet anay taloha. Nametraka ity faucet mainty vaovao ity izahay ary mahavariana! TSARA TSARA, mora ny nametraka azy, ary tiako ny fantsom-paosy / pop-up!
Mahafinaritra ity faucet ity. Mijoro avo izy nefa tsy lava loatra. Vita mafy izy io. Tsy nahatsapa ho mora vidy mihitsy. Ity dia vokatra sarobidy sy kalitao lehibe.
R *** f2020-08-01
Napetraka tao amin'ny efitranon'ny zanako vavy io ary niasa tsara izy. Mora apetraka, miseho ary mandeha tsara. Efa manana drafitra hividy bebe kokoa ary hanolo ireo faucet fandroana hafa amin'ilay iray ihany.
Nividy an'izany ho an'ny fanavaozana ny trano fidiovana. Faucet tena tsara ary tonga lafatra ny vidiny. Tsy mpankafy fantsona mipoitra fa mendrika ny kalitao amin'ity vidiny ity.
Rehefa avy niantsena tao amin'ireo mpivarotra ambongadiny fanamboarana boaty ny trano, hitan'ny vadiko tao amin'ny WOWOW ireo ary manodidina ny antsasaky ny vidin'ireo ao amin'ny magazay. Amin'ny maha cheapskate ahy, dia faly aho nanangona vola, indrindra rehefa tena tsara ny hevitra. Ireny fampitaovana ireny dia ohatra iray ahazoanao mihoatra ny vola naloanao. Mahafinaritra ny endriny ary tena tsara ny fonosana - niaro ny endrika ivelany izy io, toy ny ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zatovo. Ny hany maharatsy azy dia ny iray amin'ireo famaranana ny tahony dia nisy ratra ambonin'izany. Raha jerena ny fonosana rehetra dia nahagaga ny nahita an'ireto, saingy angamba i QC nanonofinofy tamin'io hazakazaka io. Soa ihany fa ny tsy fahalavorariana dia eo an-damosina ka tsy hisy hahita azy ireo afa-tsy angamba raha aondriko amin'ny zoro tsy voajanahary ny tendako. Tsy nanam-potoana handefasana ny seta izahay. Ny faucet dia lava be raha oharina amin'ny ankamaroan'ny faucet ao amin'ny trano fandroana izay tsara amin'ny famenoana tavoahangy lava. Tena hanome sosokevitra izany amin'ny namana izahay.
Nividy an'io ho an'ny trano fandroana aho, izay havaozintsika amin'ny ho avy, ka tsy te handany vola be amin'izany aho, koa tsy nividy faucet Moen na Delta kalitao tahaka ny any amin'ny fidiako hafa aho fa nividy an'ity iray. Tsy fantatro fa hahazo faucet tsara kalitao kokoa aho amin'ny antsasaky ny vidiny! Ny rehetra amin'ireo mpampitohy (afa-tsy ireo fittings mampifandray haingana) dia vy. Tsy vy metaly maty na plastika miloko chrome- fa faucet vy misy fittings vy sy connectors. Tsy toy izany ny faucets marika premium amin'ny vidiny roa. Ny kalitao dia tena tsara, ny endrika dia tsara sy mora apetraka, ary ny farany maharitra sy mahatohitra tasy. Nanjary fantsom-pandroana ankafizinay indrindra ao an-trano io. Fonosina sy arovana tsara ary tsy misy fangarony izany rehefa tonga. Ny hany zavatra ratsy azoko lazaina dia ny torolàlana momba ny fametrahana dia mety ho nazava kokoa ary tsy nanana fanazavana vitsivitsy. Ankoatr'izay, tena mividy be ity- rehefa tonga ny fotoana hanoloana ireo faucet hafa dia hitady ireo aho fa tsy handoa ny marika lehibe. Ampirisihina mafy.
A *** ny2020-08-06
Perfect! Mbola tsy nametraka zavatra toy izao mihitsy aho taloha, ary azoko antoka fa elaela kokoa noho izaho vao sambany nanao an'io- fa tena tsy sarotra loatra ny nanao azy irery! Ny ampahany sarotra indrindra dia ny nanala ilay faucet taloha. Amin'ny tena faly amin'ity faucet miely ity.
Perfect! Mbola tsy nametraka zavatra toy izao mihitsy aho taloha, ary azoko antoka fa elaela kokoa aho satria vao sambany nanao an'io- fa tena tsy sarotra loatra ny nanao azy irery! Ny ampahany sarotra indrindra dia ny nanala ilay faucet taloha. Faly tokoa aho fa nosoloiko faucet 3 fandroana XNUMX ireto. Fametrahana mora be raha toa ka ny haben'ny lavakao dia tsy izany. Nihevitra fotsiny aho fa mitovy daholo izy rehetra. Raha vantany vao naparitako ny lavaka malalako dia tsy nanana olana aho. Mipetraka ambonin'ilay filentehana ambony kokoa izy ireo izay manome ny endrik'ilay filentehana milentika lehibe kokoa. Tsy mipoitra lavitra noho ireo nananako izy ireo.
*** O H2020-08-09
Nividy zava-poana vaovao izahay izay tonga niaraka tamin'ny faucet "maimaim-poana", mora izany ka nanapa-kevitra ny hividy zavatra izahay. Nandeha tany amin'ireo magazay fanatsarana trano be boaty izahay ary maoderina loatra ny zava-drehetra nitady ny tsiriko sy manodidina ny $ 150. Nanapa-kevitra ny hijery an-tserasera izahay ary nahita an'io ho an'ny antsasaky ny vola efa nalainay. Toa tena tsara tarehy io miaraka amin'ny counter zinc antsika ary mahatsapa tena matanjaka.
V *** f2020-08-11
Mba tsy hanavakavaka ny maha-lahy na maha-vavy ahy mihintsy, fa vehivavy te-hanolo ny fitoerako sy ny faucet fidiako aho. Nividy ity faucet ity aho, nosokafako ary tao anatin'ny 45 minitra dia napetraka tao amin'ny fitoerako vaovao. MAPETSAKA MORA !!
Ireo no faucet tsara indrindra nentiko. Namboarintsika fotsiny, ary nividy olon-kafa izay "marika marika" aho, saingy nanantena aho fa nahazo ireo rehetra ireo. Nieritreritra ny zava-drehetra izy ireo! Ny vokatra dia avo lenta. Vidio ireo dia tsy hanenenanao izany.
Novidiko roa ho an'ny reno fandroana master anay. Nanana olana kely tamin'ny iray amin'ireo set aho fa ny orinasa no nikarakara azy io niverina nefa tsy nisy olana. Tena gaga be aho amin'ny fijery antonony sy kely amin'ny seta izay mandeha tanteraka amin'ny haingonay.
C D ***2020-08-15
Ity faucet ity dia manana famaranana tsara dia tsara. Ny fipetrahan'ny faucet dia mipetraka ambony ka misy toerana malalaka hanasana tanana. Ilay sombin-drano ampidirina ao anatiny dia tsara ihany koa.
Fitaovana fantsona tena tsara tarehy. Mahafinaritra azy ireo ny zava-poana sy zava-poana. Tsy hita ny iray amin'ireo tatatra pop up, ary namaly ny serivisy ho an'ny mpanjifa avy hatrany fa mandefa iray izy ireo.
FIVORIANA 8 ao amin'ny. Manabe fandroana fandroana 2-tànana azo ...
Fangaroan'ny koveta mandro ao amin'ny efitra fandroana WOWOW
Fangady fandroana efitrano fandroana Centerset WOWOW amin'ny alàlan'ny alika ...
MIFANDRAISA AMINAY E-mail: sales@wowowfaucet.com
Aza adino izany: Mividiana 1 ahazoana 1 amin'ny 10% Dismiss